Real Madrid oo hogaanka lagala wareegay & kulamadii La Liga ee todobaadkan – SBC
Real Madrid oo hogaanka lagala wareegay & kulamadii La Liga ee todobaadkan
Posted by editor on October 24, 2011 Comments
Ciyaaro qayb ka ahaa kulankii 8-aad ee horyaalka Spain ee La Liga ayaa la ciyaaray sabtidii iyo axadii la kala dhaliyey 19 gool oo 15 ka mid ah Axadii la kala dhaliyey.
Kulamadan ayaa isbadal ku keenay hogaanka horyaalka Spain ka dib markii Barcelona barbardhac lagu qabtey, Real Madrid oo badisayna ay garabka ku dhufatey Levante.
Levante oo taariikhda markii ugu horeysay 102 sano ah qabatey hogaanka Spain
Sadex goo laba ka mid ah qaybtii hore uu dhaliyey ciyaaryahank Juan Luis Gómez López, oo loo yaqaan Juanlu iyo gool kale oo uu dhaliyey Aroune Konte daqiiqadii 58-aad ee qaybta dambe ee ciyaarta ayaa u saamaxay kooxda Levante in markii ugu horeysay taariikhdeeda 102 sano ay qabato hogaanka horyaalka Spain ee La Liga.
Guusha sadexda dhibcood & sadexda gool ee Levante waxay meesha ka saartey hogaan qabaqashadii Real Madrid ee mudada saacadaha aheyd.
Levante waxay 2 dhibcood oo nadiif ah ka sareysa kooxda Barcelona halka hal dhibic ay ka sareyso kooxda Real Madrid.
Levante oo marti u aheyd Villarreal waxay guud ahaanba ku gacan sareysay kulankan oo ka dhacay guriga Villarreal Estadio El Madriga oo 87 sano jir ah.
Barcelona oo barbardhicii 3-aad lagu qabtey & Messi oo rigoore lagu ceebeyey
Kooxda Barcelona ee haysata horyaalka Spain iyo kan qaarada Yurub ayna u badan yihiin xidigihii ku guuleystey koobkii aduunka ee 2010 ayaa wacaro adag wuxuu ka qabsadey kulan gurigeeda Camp Nou ay kula yeelatey kooxda Sevilla oo 14-kii bishan October 106 sano jirsatey.
Goolhayana Savilla Jav Varas ayaa la oran karaa wuxuu ahaa badbaadiyaha kooxdiisa, iyo madax xanuunka Barcelona & laacibka aduunka Lional Messi ka dib markii uu badbaadiyey ama uu ka qabtey rigoore Messi .
Kulankan ayaa noqdey kii ugu horeeyey ee ciidamada Pep Guardiola oo waliba ku ciyaaraya gurigooda Camp Nou neefta lagu celiyo ka dib markii tababaraha martida ahaa oo ay isku da’yihiin macalinka Barcelona Guardiola wuxuu calaamad ama go’doon saaray laabicibiinta ay ku dhaarato Barce ee ay ku dhaqaaqdo Messi & Iniesta kuwaasi oo dhaqaaqi waayey.
Awooda ay muujisay Seville ayaa waxaa ka mid ahaa in 9 nin ay kula ciyaartey Barcelona ka dib markii ay kaarka cas qaateen ciyaaryahanada Frederic Kanoute & Fernando Navarro.
Rael Madrid oo dhalisay sadexleydii 5-aad xili ciyaareedkan sideedii kulan ee ay ciyaartey
Kooxda Real Madrid ayaa mar kale keydka kala soo baxdey goolasha loo dhaliyo sadexleyda (Hat rick) ee hal ciyaartoy uu hal kulan ku dhaliyo ka dib markii ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu dhaliyey sadex ka mid ah goolasha Real ay ku dubatey kooxda Malaga ee uu iska leeyahay maalqabeenka reer Qadar ee ka mid ah qoyska boqortooyada qadar ee lagu magacaabo Sheikh Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani.
Kulankan oo ka dhacay guriga Malaga ee Estadio La Rosaleda waxaa kooxda martida loo ahaa ay isku dayday si kasta oo ay isaga soo gudi karto goolasha 15-kii ee ugu horeysaba uu sadex ka mid ah ka xareeyey Ronaldo.
Laakiin laacibiinta Malaga ma aanay niyad jabin oo weerar ay ku hayeen goolka Real inkastoo la oran karo waxaa si weyn u badbaadiyey kooxda Martida ah goolhayahooda captain Ikar Casillas oo aan nasiino ka muuqan ilaa dhamaadkii ciyaarta.
Goolka afaraad Real Madrid waxaa u saxiixay ciyaaryahanka reer Argantine Gonzalo Higuain oo goolkaasi uu u noqonayo kiisii sagaalad xili ciyaareedkan.
Link-ga hoose ka daawo wacdarihii Real Madrid ay ku dhigtey Malaga.
Kulamada kale ee La Liga Spain
Athletic Madrid 1-1 Mallorca
Osasuna 3- 0 Real Zaragoza
Real Sociedad 0-0 Gatafe
Real Betis 0-2 Rayo Vallecano
Messi 10 gool Barcelona
Ronaldo 9 gool Real Madrid
Higuain 9 gool Real Madrid
Radamel Falcao 6 Gool Athliteco Madrid
1 Levante 8 11 20
2 Real Madrid 8 22 19
3 Barcelona 8 22 18
4 Sevilla 8 4 16
5 Valencia 8 3 15
6 Malaga 8 -1 13
7 Real Betis 8 -3 12
8 Espanyol 8 -4 12
9 Atletico Madrid 8 2 10
10 Osasuna 8 -6 10
11 Athletic Bilbao 8 0 9
12 Mallorca 8 -2 9
13 Rayo Vallecano 8 -3 9
14 Real Zaragoza 8 -7 9
15 Real Sociedad 8 -3 8
16 Villarreal 8 -7 7
17 Getafe 8 -4 6
18 Granada 8 -8 5
19 Sporting Gijon 8 -7 4
20 Racing 8 -9 4